DAAWO: Beesha Jareer Weyne oo dhagan Sh Shibli oo Yidhi “Ninka Nabi Mohammed Scw lagu tilmaamay Jareer ayuu u egyahay. – Xeernews24
DAAWO: Beesha Jareer Weyne oo dhagan Sh Shibli oo Yidhi “Ninka Nabi Mohammed Scw lagu tilmaamay Jareer ayuu u egyahay.
20. September 2017 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Beesha Jareerweyne oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa si xun uga xumaatay hadal dhawaan kasoo baxay Sh Shibli oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waa weyn.
Wadaadka oo dhawaan ka hadlayay nin magaalada Gaalkacyo kusoo bandhigay Sawir AFLAGAADO ku ah Nabigeena Mohammed SCW ayaa waxaa uu yidhi “Marba hadii uu sawir kusoo qaadanayo muu sawir qurxoon kusoo qaato markii uu Nabigeena Sawir Jareer ah kusoo qaadanayo”.
Laakiin Beesha Jareer weyne ayaa si weyn uga cadhootay hadalka Wadaadka, waxaana ay ka dalbadeen inuu raali gelin deg deg ah ka bixiyo. waa markii labaad ee sheekha laga maqlo hadalo ay bulshada jeclaysan mar hora ayuu goob fagaara ka sheegey sheekhu in uu indhihiisa ku soo arkay gabdha soomaaliyeed oo tiradooda wuu ku sheegey ila 700 oo la ildaran xanuunka Adis-ga arintaas oo markii laga daba tagey la waayey meel ay ku jiraan gabdhaha wuu sheegey.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/shibil.jpg 193 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-20 16:39:392017-09-20 16:39:39DAAWO: Beesha Jareer Weyne oo dhagan Sh Shibli oo Yidhi “Ninka Nabi Mohammed Scw lagu tilmaamay Jareer ayuu u egyahay.
DAAWO Yaabka Qaar ka mid ah xildhibaaandi saylac oo sunti qaadka ee laga nastay... Shirka Midnimada beelweynta Maamasan ee gobolka Salal